Ogaden News Agency (ONA) – UNOCHA oo Warbixin Kasoo Saartay Xaaladda Bini’aadannimo ee Soomaaliya.
UNOCHA oo Warbixin Kasoo Saartay Xaaladda Bini’aadannimo ee Soomaaliya.
Warbixin uu soo saaray xafiiska Isku duwidda arrimaha bini’aadannimada u qaabilsan Qaramada Midoobay (UNOCHA) ayaa lagu sheegay in xaalad bani’aadannimo ay ka dhalatay roobab xooggan oo ka da’ay deegaannada ay maraan webiyada Jubba iyo Shabeelle ee gudaha dalka Soomaaliya.
Waaxda hay’adda FAO u qaabilsan biyaha iyo xogta dhulka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo (SWALIM), ayaa laga soo xigtay in marka laga reebo Jowhar, heerka biyaha ee webiyada ay iminka tahay mid caadi ah, balse ay jirto khatar ka dhalatay fatahaad ay sameeyeen labada webi.
Warbixinta SWALIM ayaa lagu sheegay in isu geynta dad lagu qiyaasay 144,000 ay saameeyeen daadad ka dhashay roobab xooggan oo da’ayay tan iyo bishii October ee sanadkan. Dadka ayaa badankooda ku nool gobollada Hiiraan, Jubbada hoose, Jubbada dhexe, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha hoose.
Xilli roobabka ay ku sii yaraanayaan gobollada qaar ee dalka, haddana roobab xooggan ayaa lagu soo warramayaa inay ka da’ayaan degmooyinka Afgooye iyo Janaale ee gobolka Shabeellaha hoose, sidoo kale warbixinta SWALIM ayaa lagu sheegay in roobab xooggan ay ka da’ayaan tuulooyinka Buulo-mareer iyo Shalambood ee Shabeelaha hosoe.
Dhanka kale warbixinta ayaa lagu sheegay inay sii kordheyso tirada gobollada uu ka dillaacay shuban biyoodka. Gobolka Banaadir ayaa lagu soo warramayaa in degmada Xamar-weyne ay shuban biyoodka ugu geeriyoodeen seddex carruur oo da’doodu ka yareyd 5 sano jir, waxaana la sheegayaa in tiro kale oo uu xanuunku hayo la dhigay isbitaalka Banaadir. Sidoo kale kiisaska xanuunka mallaariyada oo sii kordhaya iyo shuban biyoodka ayaa laga soo sheegayaa gobolka Gedo.
Seddex qof ayaa gobolka Shabeellaha dhexe ugu dhimatay shuban biyoodka, 9 kalena waxaa la dhigay xarumaha caafimaadka, sida lagu sheegay warbixinta.